China ngerabha ukutyabeka, ugqithiso lwamanzi, i-UV isikhuseli sombane sombane ngebrashi eguqukayo yomzi mveliso kunye nabenzi | Yongsheng
Ukutyabeka ngerabha, ukuhambisa amanzi, i-UV isikhuseli seenwele ze-paddle kunye nomqamelo oguqukayo
Izinto: ABS, irabha, nenayiloni,
Iiphedi zebrashi kunye nomqamelo oguqukayo kunye nezikhonkwane zenayiloni. Nokuba uneenwele ezicocekileyo, ezingqindilili, ezigobileyo, ezimanzi okanye ezomileyo. Ayizukutsala okanye irhuqe, endaweni yoko ii-bristles ezijikeleziweyo ziya kuthambisa ngobunono isikhumba sakho. Kananjalo inokufezekisa iziphumo zobungcali ekhaya ngesitayile esikhawulezayo nesisebenzayo, esifanelekileyo sokuphazamisa kunye nokomisa ukomisa ukuthatha iinwele zakho zimanzi zome. Ishiya iinwele zakho zithambile, zigudile kwaye zilungile. Inemilo yemveli eyenzelwe ukolula, volumize, ukuphazamisa okanye isitayile ngelixa usomisa, baya kuprinta iintyatyambo kunye nemibala yeelekese. Beka ibrashi yesimbo sokubamba ngesiseko sayo esibanzi, esiguqukayo kunye nebristles encamathele ebholeni, ukuze usebenze kwaye wonwabele uxinzelelo lokuxubha kunye nokuphazamisa. Iibhulashi zePaddle zilungele iinwele ezinde ezithe nkqo okanye iinwele ezishinyeneyo. Umoya ozele ngumqamelo usebenza njenge-intshi yokutshatyalaliswa kwe-intshi ye-scalp yakho. Iingcebiso eziboshwe, ezijikeleziweyo ze-bristle zinceda ukukhusela ukukhawuleza kunye nokuqhekeka kwaye zenze ukuxubusha ngaphandle kokutsala.
Ibrashi yokubopha iinwele eneentlobo ezahlukeneyo zokuphatha kunye ne-ergonomic engatyibilikiyo. Ezi zibambo zenzelwe ngokukodwa ulawulo oluphezulu kunye nokuthuthuzela ngelixa isitayile. Kulula ukufezekisa iziphumo zobungcali ekhaya kunye nale brashi. Unokukhetha iindidi ezininzi zokubamba, isiphatho esenziwe ngokulula esilula, isiphatho kuyilo lweplate, ubume obukhethekileyo bokubamba ...
Egqithileyo Iibrashi zeenwele ezijikelezileyo ezinobunzima bokumelana nobushushu kwisitayile esahlukileyo
Okulandelayo: Ukutyabeka ngerabha, umbane we-UV, ukushicilela ukukhanya, ukuhambisa iinwele ngebrashi eneebhanti zeIntelliflex
Ijika lebrashi yeenwele
Ibrashi yeNwele eqinileyo
Ulenze lwebrashi yeenwele
Umjikelo weRubber weenwele ojikelezayo
Iibhrashi zeenwele ezingunxantathu
Ngerabha ukutyabeka, UV yombane, ushicilelo shinning, w ...
Iinwele Professional ngeenxa zonke brush with tempera eliphezulu ...